5 विचारहरू क्लाउड भण्डारण चयन गर्दा सहयोग र उत्पादकता अधिकतम गर्न | Martech Zone
क्लाउडमा निर्बाध रूपमा फोटो, भिडियो र संगीत जस्ता बहुमूल्य फाइलहरू भण्डारण गर्ने क्षमता एक आकर्षक सम्भावना हो, विशेष गरी मोबाइल उपकरणहरूमा (सापेक्ष रूपमा) सानो मेमोरी र अतिरिक्त मेमोरीको उच्च लागतको साथ।
तर क्लाउड भण्डारण र फाइल साझेदारी समाधान छनौट गर्दा तपाईंले के हेर्नु पर्छ? यहाँ, हामी सबैले आफ्नो डाटा कहाँ राख्ने भनेर निर्णय गर्नु अघि विचार गर्नुपर्ने पाँचवटा कुराहरू तोड्छौं।
नियन्त्रण - के म नियन्त्रणमा छु? तेस्रो-पक्षमा तपाइँको सबैभन्दा बहुमूल्य सम्झनाहरू विश्वास गर्नको लागि एक नकारात्मक पक्ष भनेको चीजहरू भण्डारण गरिएको ठाउँमा तपाइँको नियन्त्रण गुमाउनु हो। यो सबैले विचार गर्ने कुरा नहुन सक्छ, तर उदाहरणका लागि, अमेरिकामा डेटा कानूनहरू युरोप भन्दा धेरै फरक छन्। त्यो मात्र होइन, तर क्लाउड भण्डारण प्रदायकहरूको व्यावसायिक उद्देश्यका लागि तपाईंको जानकारी फसल गर्ने क्षमता अज्ञात र अवांछित व्यापार बन्द हुन सक्छ।
सुरक्षा - मेरो डाटा सुरक्षित छ? कुनै पनि क्लाउड भण्डारण प्रदायकले आफूलाई कमजोरको रूपमा फ्ल्याग गर्दैन, तर त्यहाँ धेरै उच्च-प्रोफाइल उदाहरणहरू छन् जहाँ ठूला प्राविधिक फर्महरू साइबर हमलाहरूबाट फुकेका छन्। हामी सैन्य ग्रेड मापदण्डहरू सञ्चालन गरेर यस क्षेत्रमा नेतृत्व गर्छौं। यसबाहेक, हामी क्लाइन्ट-साइड इन्क्रिप्शन प्रस्ताव गर्दछौं, जसको मतलब डाटा हाम्रो सर्भरहरूमा पुग्नु अघि इन्क्रिप्ट गरिएको छ। नियन्त्रणको यस विषयवस्तुमा निर्माण गर्दै, यसको मतलब हामीले व्यावसायिक लाभको लागि तपाईंको डाटा संकलन गर्न सक्दैनौं।
लागत - म कति तिर्दै छु? क्लाउड भण्डारण प्रदायकहरूको लागि प्रारम्भिक आकर्षणहरू मध्ये एक अपेक्षाकृत सस्तो प्रविष्टि लागत हो, विशेष गरी जब मासिक विभाजित हुन्छ। समस्या यो छ कि प्रयोगकर्ताहरूले यो सानो मात्राको भण्डारण मार्फत कति चाँडो जलाउँछन् - र धेरै चाँडै प्रदायकमा भर पर्छन् र बढ्दो रकम तिर्छन्।
सजिलो प्रयोग - यो प्रयोग गर्न सजिलो छ? विशेष गरी क्लाउड भण्डारण बजारमा आफ्नो पहिलो चरणहरू बनाउनेहरूका लागि, शब्दजालमा हराउने सम्भावना छ। हामी हाम्रो एप मार्फत वा डेस्कटपमा प्रयोग गर्ने हाम्रो सहजतामा गर्व गर्छौं। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, हामी परिवार, साथीहरू र सहकर्मीहरूसँग फाइलहरू साझेदारी गर्न सजिलो बनाउँछौं।
डेटा पुन: प्राप्ति - के म फाइलहरू रिकभर गर्न सक्छु? दुर्भाग्यवश, साइबर आक्रमणहरू एक बढ्दो खतरा हो, जसले फाइलहरूलाई भ्रष्टाचारको जोखिममा राख्छ। हामी प्रयोगकर्ताहरूलाई फाइलहरूको अघिल्लो संस्करणहरू पहुँच गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछौं, यसको मतलब ransomware जस्ता चीजहरूले प्लेटफर्ममा भण्डारण गरिएका अघिल्ला सम्झनाहरू नष्ट गर्न आवश्यक छैन।
स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तालाबन्दीहरूले मानिसहरूलाई पहिले जस्तो छुट्याउँदैन, क्लाउड भण्डारण र फाइल-साझेदारी प्लेटफर्महरूमा मानिसहरूलाई जडान राख्नको लागि निर्भरता कहिल्यै ठूलो भएको छैन। हामी विश्वास गर्छौं कि यी मुख्य प्रश्नहरू हेरेर, उपभोक्ताहरूले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण समयमा जडान गर्न आवश्यक सबै चीजहरू पाउनेछन्।
pCloud: क्लाउड भण्डारण
pCloud व्यक्ति र व्यवसायहरूका लागि एक व्यापक, प्रयोग गर्न सजिलो क्लाउड भण्डारण समाधान प्रदान गर्दछ। हाम्रो दृष्टिकोणले अन्तिम प्रयोगकर्तालाई दिमागमा राखेर प्राविधिक दृष्टिकोण समावेश गर्दछ। अन्य क्लाउड सेवाहरू या त धेरै प्राविधिक छन् र प्रयोगकर्ता-अनुकूल छैनन्, वा तिनीहरू क्लाउड भण्डारणबाट आफूले चाहेको सबै कुरा प्राप्त गर्नका लागि प्रयोगकर्ताहरूको लागि पर्याप्त व्यापक छैनन्।
यसका लागि iPhone 13 Pro वा Samsung S21 Ultra + 2TB लाइफटाइम भण्डारण जित्नुहोस् फ्रिज ब्ल्याक। प्रतियोगितामा प्रवेश गर्न, यहाँ जानुहोस्:
अब प्रतियोगिता प्रविष्ट गर्नुहोस्!
टैग: सम्पत्ति व्यवस्थापनब्याकअपबादलक्लाउड भण्डारणडेटा पुनःप्राप्तिडाटा सुरक्षाडिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापनफाइल सहयोगफाइल व्यवस्थापनफाइल साझेदारीpCloud